Tanàna tsara indrindra mba Hihaona Ankizivavy ao Meksika - ry Zalahy Nightlife
Tanàna tsara indrindra mba Hihaona Ankizivavy ao Meksika — ry Zalahy Nightlife
Ity lahatsoratra mikasika ny tanàna tsara indrindra mba hihaona ankizivavy ao Meksika izahay handeha hamaky azy ho roa ny fizarana samy hafa. Voalohany eny, isika dia miresaka momba ny tanàna tsara indrindra mba hihaona iray ny ankizivavy ao Meksika izay mety ho liana amin’ny fiarahana amin’ny any ivelany ny lehilahy. Ny mponina ao an-toerana izay velona tsy misy izay afaka miezaka mba hihaona ny mampiaraka, namana amin’ny soa, na tsotsotra lelam-pitana dehibe. Rehefa afaka izany, isika dia miresaka momba ny tsara touristy tora-pasika tanàna fa manana be dia be ny nightlife. Tsy lehibe noho ny fivoriana eo an-toerana Meksikana ny ankizivavy izay tsy hookers, fa misy na ho be dia be ny mpizaha tany na hookers manodidina. Fa alohan’ny hidirantsika rehetra izany isika, dia ilaina ny harodako ny zavatra tokony ho fantatrao alohan’ny anao hitsidika ity firenena ity. Ny ankamaroan’ny olona mamaky izany angamba mieritreritra izany no tena mampidi-doza toerana, ary raha misy faritra azo antoka fa dia ny haino aman-jery mitady ny kapoka zavatra ary izao no ho tranga iray izay. Ny ankamaroan’ny ny herisetra eto dia mifandray amin’ny zava-mahadomelina sy ny vola, toy ny ankamaroan ny herisetra na aiza na aiza eto amin’izao tontolo izao ve. Noho izany, tsy mahazo tafiditra ao misy turf ady na ho eo amin’ny toerana ratsy tamin’ny fotoana ratsy ary tokony ho tsara. Ny ankamaroany dia mijanona fotsiny avy amin’ny ananana sisin-tanàna, iray miavaka isika, dia mahazo ny taty aoriana. OK, aleo isika hanomboka amin’ny toro-hevitra ianao rehefa avy, sy araka izay rehetra izay dia milaza ny tsara indrindra online dating site hihaona Meksikana ny tovovavy ihany koa. Tsy isalasalana fa ny zavatra manan-danja indrindra azonao atao vao tonga ianao dia hianatra ny sasany amin’ireo teny espaniola. Tsy mila mahay tsara, na izay mety ho tsara, fa mila mahafantatra ny sasany. Raha toa ka tsy mahalala na inona na inona ianao dia mbola ho afaka lelam-pitana ny amin’ny ankizivavy sasany, fa ny top-notch ireo dia ho toy izany sarotra be ny isa. Misy efa tena vitsy backpacking gringos mandeha manodidina izay tsy afaka mifandray amin’ny, inona no mahatonga anao hitsangana avy amin’ny azy ireo. Hanandrana ary hianatra mafy araka izay azonao atao, ary izany no handoavana ireo vola fotoana lehibe ho anao. Tsara iray hafa tendron’ny ravin dia hanofa toerana amin’ny Airbnb mahafinaritra faritra an-tanàna akaikin’ny tsara nightlife. Izany dia foana manontolo be mora kokoa ny mitarika ny tovovavy indray ny toerana noho ny hotely, trano fandraisam-bahiny fotsiny fa slutty fanilikilihana ny momba azy ireo. Fa raha manana ny tsara apetraka misaotra ny fandehanana lavitra na fohy taxi mitaingina avy amin’ny fikambanana hitsena azy teo, izy dia ho be kokoa ny mety hiteny hoe eny. Misy matetika ny ‘gringo mpihaza’ izay dia ny zazavavy izay tsy toy ny eo an-toerana ry zalahy sy te fotsiny mba hahazatra ny amin’ny vahiny ny olona. Ireo no mora indrindra ireo mba hahazo nametraka azy, fa ireo efa manodidina ny andian-tsoratra tena fotoana vitsivitsy. Inona matetika no mitranga rehefa ny lehilahy mandehandeha any amin’ny firenen-kafa dia mifarana ny fanaovana firaisana amin’ny ireo mora ny ankizivavy sy ny mieritreritra ny rehetra ny mponina ao an-toerana dia toy izany. Raha ny marina, raha te-isa amin’ny mafana indrindra ny ankizivavy ianao dia mila mahafantatra ny fiteny espaniola, manana lalao, ary angamba na dia miasa an-dalana ho any amin’ny faribolana ara-tsosialy izay tena nanana ny diany fohy. Haingana generalize momba ny mponina ao amin’ny firenena rehefa voalohany miampita ny sisintany maro amin’ireo mponina ao an-toerana dia ho avo kokoa sy manana maivana hoditra. Rehefa ianao handeha lavitra kokoa atsimo, dia mahazo fohy kokoa ary ny hoditra dia hahazo ny maizina. Raha te — mba hihaona iray ny ankizivavy Mexico mety ho toerana tsara hanombohana. Izany no iray amin’ny lehibe indrindra tanàna eto amin’izao tontolo izao ary mandra-efa tena tsy afaka mahatakatra fa tena lehibe izany. Mazava ho azy, fa tonga miaraka amin’ny lehibe mahazaka fanendry mamboatra ny famahanana toy ny tena ratsy ny fifamoivoizana sy ny fahalotoana. Etsy ankilany, izany ihany koa ny manome anao ny lehibe indrindra ny fiarahana amin’ny dobo filomanosana ho hitanao na aiza na aiza. Toy ny fotoana voalohany mpitsidika tena tokony hiezaka mba hijanona any ho any ao na Condesa, Roma, na Polanco. Ireo no tsara tarehy upscale faritra izay rehetra efa tsara be ny nightlife. Raha toa ianao te-hahita mora ny ankizivavy tany Mexico City izay te-hook up amin’ny vahiny ny olona jereo Club Rodezia. Rehefa afaka izany, dia mitady ho an’ny tanàna kely amin’ny tsy gringos manodidina. Toy izany ianao dia manana ny ambony vahiny lafin-javatra, ary tany amin’ny toerana toy ny Morelia dia tanteraka izany.
Ity tanàna ity dia manana laza ratsy ho an’ny maha-tena mampidi-doza fa raha toa ka mijanona ao Zapopan tokony ho ekena. Izany dia azo antoka faritra maro nightlife, ary izany dia fohy ny mitaingina ny bebe kokoa nightlife ao Centro toy Unplugged. Leon dia tanàna ihany koa dia manana tsara nightlife ary izany dia tsara tarehy soa aman-tsara amin’ny alalan’ny Mexico fitsipika. Monterrey tsy akaiky amin’ny maha-azo antoka izay midika hoe vitsy ny mpizaha tany sy avo vahiny sarobidy. Hijanona ao Barrio Antigua izay dia izay dia afaka mahita ny sasany amin’ireo tsara indrindra nightlife ao an-tanàna.
Farany, isika dia milaza ny Puebla
Misy dia tena tsara nightlife ao amin’ny Fitoeran-javatra an-Tanàna, fa ianareo dia mety te-hijanona ao Cholula. Io no tanàna lehibe ho an’ny fety satria efa condensed nightlife faritra misy, ho azo antoka izay hijery tsara Bar Reformat. Ahoana raha te-ho lohany mba hiezaka ny hihaona ankizivavy ao Meksika raha mbola teo amin’ny tora-pasika mahafinaritra fialan-tsasatra.
Tsara avy eo, isika roa lehibe toerana izany dia manoro hevitra
Raha te-haka ny mpizaha-tany, dia Cabo San Lucas angamba ny tena toerana tokony haleha. Izany no tena Poppin’ izao ankehitriny izao, ary ny olona dia tondra-drano avy amin’ny manerana izao tontolo izao. Izany dia fantatra ho toy ny toerana lehibe noho ny tora-pasika sy ny nightlife sy ny tovovavy izay mitsidika tena aoka mahamenatra eto. Ny tsara indrindra ny faritra an-tanàna mba hijanona raha te-hanaisotra ny ankizivavy no ho Lehibe ao an-toerana akaiky Manga tokotanin-tsambo. Ny zavatra tsara indrindra azonao atao mba hahabetsaka ny mponina ny vintana hahazo nametraka ny fantsona talohan’ny ianao tonga. Andramo ary hihaona amin’ny ankizivavy Meksikana Cupid isan-kerinandro, na folo andro alohan’ny mitodi-doha ho any an-tanàna rehetra. Midira ao amin’ny tranonkala, mikaroka ny tanàna manaraka ianao dia tsidiho ny, ary mandefa hafatra rehetra ny sexy ankizivavy ianao dia jereo. Tsarovy fa mety tsy ho tena tsara ny teny anglisy izany dia hitandrina ny zavatra fohy sy ny mamy. Avy eo dia afaka manomboka ny kinendry ny mafana indrindra ny tovovavy izay valin, mandefa ny resaka nandritra ny niady hevitra ny fampiharana, ary nanangana ny daty miaraka amin’izy ireo rehefa tonga any. Izany dia tena hanafainganana ny dingana sy hanatsara ny vintana. Meksikana Cupid no ambony mampiaraka toerana ao amin’ny firenena, ary ianao dia afaka misoratra anarana maimaim-poana mba jereo ny zavatra tsy maintsy manolotra eo anatrehanao sonia. Izany dia odian-tsy hita firenena maro ry zalahy noho ny fomba mampidi-doza ny haino aman-jery no mahatonga izany ny feo. Izany antoka fa tsy ny toerana azo antoka indrindra eto amin’izao tontolo izao nefa raha toa ianao an-tsaina ny manokana ny raharaham-barotra, ary tsy professional cash anao dia inoana ny mahazo an-olana. Raha toa ianao ka mampiasa ny fiarahana amin’ny aterineto sy ny fantsona amim-pahombiazana ianao dia tokony ho afaka hanana be dia be ny daty nilahatra talohan’ny ianao tonga tao an-tanàna.
Arakaraka ny daty mandeha ny fotoana bebe kokoa ianao, dia isa
Na dia afaka miezaka fotsiny mba haka ny ankizivavy ao amin’ny nightlife faritra manodidina ny tanàna, fa hanana be dia be kokoa hampifandrafy sy hitarika ny sasany irery ny alina. Tsara vintana rehefa mitsidika ny tanàna tsara indrindra mba hihaona ankizivavy ao Meksika
← Top dimy Tsara indrindra Meksikana Mampiaraka Toerana, Meksika Mampiaraka Toerana Reviews
Manambady Meksikana →